Matahotra Ny Mety Ho Fanakatonana Ny Aterineto Mandritra Ny Fifidianana Filoham-pirenena 2017 Ireo Keniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2017 6:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Español, Swahili, English
Ireo Keniana mampiasa Aterineto ao an-drenivohitra Nairobi. Sary Creative Commons avy amin'ny mpisera Flickr krosinsky.
Nanomboka naneho ahiahy momba ny mety ho fanakatonana ny media sosialy avy amin'ny governemanta mandritra ny fifidianana filoham-pirenena taona 2017 izay hotontosaina amin'ny volana Aogositra ireo Keniana an-tserasera .
Tsy malahelo aho kanefa afaka miloka amin'ny zavatra 3 amin'ny taona 2017: Ny fanakatonana ny Aterineto sy ny PEV ao Kenya ary ny ady lehibe faha 3.
Tamin'ny volana Jona tamin'ny herintaona, nizara sioka antsipirihan-dahatsoratra iray avy amin'ny gazety mpiseho isan'andro iray ao Kenia tamin'ny mpanjohy azy i Boniface Mwangi, Keniana mpikatroka mpakasary. Naminavina ny lahatsoratra fa manomana volavolan-dalàna mikatsaka ny fandrindràna ny fampiasana ny media sosialy ao Kenya ny governemanta. Nanaraka ny fanehoan-kevitra nataon'i Dennis Itumbi Talen'ny Biraom-panjakana misahana ny Serasera Nomerika izany.
Ho avy tsy ho ela ny fanakatonana ny aterineto ao Kenya
Rehefa nanontaniana momba ny volavolan-dalàna i Itumbi tao amin'ny fandaharana Press Pass tao amin'ny fahitalavi-pirenena, dia nandà ny fisian'ny volavolan-dalàna toy izany izy. Na izany aza ,nanakiana ihany koa ny Fikambanan'ny Bilaogera ao Kenya izy amin'ny tsy fahombiazana ‘mamehy’ ireo bilaogera. (Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: niseho teo amin'io fandaharana io ny mpanoratra, izay tafiditra ao anatin'ny lisitry ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny Itumbi.)
Tamin'ny tapaky ny volana Desambra 2016, nanakatona ny aterineto sy ny fitaovana fifandraisandavitra rehetra manodidina ny lapan'ny Antenimiera ao Kenya ihany koa ny mpandrindra ny filaminana rehefa nifandona tamin'ny fanitsiana ny volavolan-dalàna izay momba ny fifidianana ho avy ireo solombavambahoaka mpanohitra sy mpomba ny governemanta .
Tamin'ny taona 2016 fotsiny, nisy ny fisamborana olom-pirenena sy mpanao gazety Kenyana miisa 60, maro tamin'izany no vokatry ny lahatsoratra tao amin'ny media sosialy izay nosokajiana ho “fanehoana fankahalana” na mifanohitra amin'izay voalazan'ny andinin'ny lalàna mikasika ny fanozongozonana ny fahefan'ny mpiasam-panjakana sy ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fitaovana fifandraisandavitra.
Tamin'ny 12 Desambra 2016, nisioka toy izao ny mpanao gazety miara-miasa amin'ny iray amin'ireo famoahan-gazety ao an-toerana ao Kenya:
Izany no antony hanaovana fanakatonana ny media sosialy. Tsy tompon'andraikitra mihitsy amin'ny famoahan-dahatsoratra.
Nanamarina ny fanakatonana ny media sosialy nataon'ny governemanta noho ny ‘fahamaroan'ny famoahan-dahatsoratra tsy tompon'andraikitra mihitsy’ ataon'ny mpanao gazety. Eo noho eo ny valinteny nataon'ireo Kenyana tao amin'ny Twitter :
Nilaza “famoahan-dahatsoratra tsy tompon'andraikitra” ho anton'ny fanakatonana ny aterineto ireo tsy mpandray andraikitra mba tsy hanaovana fisamborana ireo olona mirotsaka amin'ny fanaovana asa tsy ara-dalàna.
Tohina noho ny antso fanakatonana ny Aterineto avy amin'ny mpanao gazety iray izay manana ny asany noho ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahan-gazety i Osman ;
Mpanao gazety iray miaro ny fanakatonana ny Aterineto sy ny sivana faobe. Eto Kenya ihany.
Tsy voalohany amin'ny firenena ao Afrika miezaka sy manakatona ny aterinetony mandritra ny fifidianana i Kenya , nanakana ny media sosialy sy ny fidirana tanteraka amin'ny aterineto mandritra ny fifidianana ireo firenena toa an'i Ouganda sy Gambia.
Tao amin'ny lahatsoratra izay nivoaka tao amin'ny Miasa ny Demokrasia, nanamarika i William Gumede fa miha-hentitra amin'ny aterineto, indrindra fa ny media sosialy, ny fitondram-panjakana Afrikana sy amin'ny fampiasa mpandefa hafatra , izay matetika oharina amin'ny ezaka hampanginana ny demaokraty mpanohitra, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo mpikatroka izay mihetsika manohitra ny fitantanana mampahonena.
Tao amin'ny lahatsorany, nanao fanadihadiana momba ny raharaha fanakatonana aterineto any amin'ireo firenena toa an'i Etiopia, Zimbabwe, Ejipta, Oganda, Mozambika sy Sodana i William. Nisy ihany koa ny ezaka tao Nizeria sy Afrika Atsimo mba hamerana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera amin'ny alalan'ny fampidirana lalàna vaovao amin'ny endrika Lalànan'ny Heloka An-tserasera sy ny fitsipika votoaty izay notoherin'ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ireo firenena roa ireo.
Anisan'ireo mpisera mavitrika indrindra ao amin'ny media sosialy aty Afrika atsimon'i Sahara ireo Keniana, ary faharoa aorian'ny Afrikana Tatsimo. Matetika antsoina hoe Keniana ao amin'ny Twitter (KOT) ny fikambanan'ny Keniana an-tserasera noho ny fivondronan'izy ireo ambadiky ny tenirohy iray manokana mba hanehoana eritreritra sy hevitra amin'ny lohahevitra miompana amin'ny olana ara-tsosialy, ara-politika ary ara-kolontsaina .
Niteraka adi-hevitra be ny fanontaniana raha toa mety hanara-maso akaiky na/sy hanao fandrindrana ny tontolon'ny media sosialy ny governemanta Kenyana. Ny firongatry ny vaovao diso — fanamby izay nanome aingam-panahy ireo lohateny lehibe maro hatramin'ny fifidianana Amerikana — no tena nahatonga izany.
Vao tsy ela akory, lasa lohahevitra malaza tao amin'ny media sosialy tao Kenya ny lahatsoratra milaza vaovao diso izay nampifandray an'i Raila Odinga, ilay te-ho filoham-pirenena efa hatry ny ela sady kandidà goavana amin'ny Fifidianana Kenyana ho avy io, amin'ny adin'i Sodàna Atsimo madra-pahafantatra ny tompon'ilay tranonkala sy nanambarana fa faikany ny lahatsoratra.
Misara-kevitra eo amin'ny lafiny ara-moraly sy ara-pitsarana ireo Keniana an-tserasera sy amin'ny fiantraikan'ny Aterineto izay arindran'ny governemanta.
Kanefa tsy miray hina tanteraka ireo Keniana amin'ity raharaha ity. Misy ireo toa an'i AnnShelly Peters, izay tsy miraharaha ny fanakatonana hahalefy ny fankahalana;
Tsy mampaninona ahy ny fanakatonana amin'ny fahitana ny fankahalana, tsaho sy ny fikasana hampitsitokotoko ara-poko izay atosiky ny media sosialy amin'izao fotoana izao.
Mihevitra i James Thagana fa efa nandeha mihoatra ny fetran'ny fahalalaham-pitenenana ireo Keniana, ary efa nandrasana hatry ny ela ny fanakatonana avy amin'ny governemanta :
@bonifacemwangi @mutuku1969 izany no tsy maintsy natao fa lasa lavitry ny fahafahany ny Kenyana .
Nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2007, nanome baiko ny fanakatonana ny mari-pampitam-peon'ny haino aman-jery rehetra nandritra ny valim-pifidianana ny governemanta Kenyana fa nifanakaiky loatra ny isam-bato ka nitarika herisetra taorian'ny fifidianana ary nahafatesana Keniana an'arivony. Kanefa efa maro ny lalana nodiavin'ny media sosialy sy ny serasera miorina amin'ny Aterineto nanomboka tamin'izay. Ho hita eo ny vokatry ny fanakatonana mety ho atao raha misy amin'izao fotoana izao.